Warbixin: Maxaa U Qabsoomay Dowladda todobaadkii la soo dhaafay | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Warbixin: Maxaa U Qabsoomay Dowladda todobaadkii la soo dhaafay
Warbixin: Maxaa U Qabsoomay Dowladda todobaadkii la soo dhaafay
Jan 30, 2016ARRIMAHA BULSHADA, MAQAALO, WARAR
Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Madaxda Dowladda oo ku heshiisay Hannaanka doorashada 2016 iyo Golaha Wasiirada oo ansixiyey, Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka oo Dhiirigeliyey barnaamijka Qorshaha iyo Siyaasada kala duwanaanshaha Noolaha, Ciidanka Dowladda oo howlgal ka sameeyey Ceelasha Biyaha ka dib amarkii Ra’iisul Wasaaraha ee dhacdadii Liido ka dib, Bannaanbax looga soo horjeedo falalka argagaxisada oo Muqdisho ka dhacay, Ciidanka Dowladda oo daawo gaarsiiyey ciidanka deegaanada howlgalka ka wada, Ciidanka Xooga Dalka oo Taageero ka helay Ciidanka Sweden, Iskuul loo diyaariyey Qaxootiga Yemen ee ku sugan Muqdisho, Ciidanka XDS oo howlgallo ka sameeyey Jowhar iyo 7 Al-Shabaab ah oo lagu dilay howlgallo .
Madaxda Dowladda oo ku heshiiay Hannaanka doorashada 2016 iyo Golaha Wasiirada oo ansixiyey
Madaxda Dowladda Federaalka oo muddo waday wadatashiyo ay la yeelanayeen Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo beesha caalamka ayaa 27kii Janaayo 2016 soo saaray go’aan ku aadan Hannaanka Doorashada 2016ka. Ka dbina Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa 28kii Janaayo 2016 shirkoodii caadiga ahaa lagu ansixiyay qodobadii ka soo baxay Shirkii Hoggaamiyaasha ee Madasha Wadatashiga Qaran ee Hannaanka Doorasho sanadkan 2016. Go’aanka ayaa ahaa:
Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka oo dhiirigeliyey barnaamijka Qorshaha iyo Siyaasada kala duwanaanshaha Noolaha
Ra’iisal Wasaare ku Xigeenka Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in samaynta Qorshahan iyo Siyaasaddan kala duwanaanshaha Noolaha lagala tashaday dhammaan Wasaaradaha ay khuseyso ee Maamullada Somaliland, Puntland iyo Maamul Goboleedyada kale ee dalka. Siyaasadan waxay ka kooban tahay qodobo muhiim ah oo ku dhisan aragti ku aadan ilaa 2050-ka oo saameyn ku leh Nolosha Dadka Soomaaliyeed maadaama boqolkiiba todobaatan ay ka faa’iideystaan waxyaabaha ay siyaasadani Xoogga saarayso, waxaana ugu muhiimsan Nolosha Xoolaha, Beeraha, Kaluumaysiga IWM.
Shan Boqol oo nooc oo Dhir ah ayaa laga helaa Soomaaliya, sidoo kale kun iyo laba boqol oo Xayawaan kala duwan ayaa hodan ku ah dalka, dhawr boqol oo nooc oo kalluun ah ayaa xeebaha laga helaa, waxaa kale oo muhiim ah in la ilaaliyo xayawaanka sii dabar go’aya sida Gumburiga, Goodirka iyo noocyo ka mida Sagaarada.
Ciidanka Dowladda oo howlgal ka sameeyey Ceelasha Biyaha ka dib amarkii Ra’iisul Wasaaraha ee dhacdadii Liido kadib
Ciidamada Hey’adda Amniga oo fulinaya amarkii Ra’iisul Wasaaraha ka dib dhacdadii Liido ee ahaa in ammaanka la sugo ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho 29kii Janaayo 2016, halkaasi oo ay ku dileen mid ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Howlgalka ayaa ahaa mid qorsheysan oo ay ciidamada ku bartilmaameedsanayeen goob ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana intii uu howlgalka socday ay ciidamadu toogasho ku dileen mid ka mid ah argagixisada Al-shabaab o ka dhago adeegay in uu ciidamada isku dhiibo, iyadoo uu halkaasi ku geeriyooday hal askari oo ciidanka ka tirsan. Ciidamadu waxa ay howlgalka ku soo qabtaeen rag lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo hub ay heysteen.
Bannaanbax looga soo horjeedo falalka amni xumada oo Muqdisho ka dhacay
Boqolaal kamid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho, ayaa 28kii Janaayo 2016 isugu soo baxay fagaare ku yaala xeebta Liido, halkaas oo dhowaan maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay ku xasuuqeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan. Ujeedada isu soo baxan ayaa ahaa in loo duceeyo dadkii dhowaan halkaasi lagu laayay, iyadoo dadweynaha ka qeybgalay dibad baxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin sida ay uga xun yihiin dhibaatada ay wadaan Al-Shabaab.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo mas’uuliyiin uu kamid yahay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa dadweynaha kala qeybgalay dibad baxan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in xilligan la joogo gabagabedii kooxda Al-Shabaab maadaama shacabka Soomaaliyeed ay ka soo horjeesteen ficiladooda guracan. Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac oo ka mid ah mudanayaasha Barlamaanka Soomaaliya isla markaana kamid ahaa mas’uuliyiintii goobta ka hadashay ayaa shacabka ugu baaqay in ay isku duubnaadaan si looga adkaado kooxdan dhiig cabka ah.
Ciidanka Dowladda oo daawo gaarsiiyey ciidanka deegaanada howlgalka ka wada
Taliska Ciidanka Militariga qaybta 21-aad ee fadhigoodu yahay magaalada Cadaado ayaa 27kii Janaayo 2016 waxaa la soo gaarsiiyay dawadii ugu horaysay oo ka timid taliska dhexe, taas oo loogu talagalay in lagu daweeyo ciidamada xanuunsanaya. Daahir Cali Xasan oo ka mid ah hawlwadeenada dawayntan samaynaya ayaa sheegay inay bilaabeen inay baaritaano u sameeyaan ciidanka iyaga oo jooga xarumohooda. G/sare Xuseen Maxamuud Cosoble madaxa maamulka qaybta 21-aad ayaa wasaaradda gaashaandhigga, taliska Military-ga iyo agaasinka Isbitalka xoogga uga mahadceliyay kaalmada dawada ah ee soo gaartay. Taliska qaybta 21-aad ee Ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in baahi loo qabo Isbital ay qaybtan yeelato si adeegga caafimaadka sare loogu qaado.
Ciidanka Xooga Dalka oo Taageero ka helay Ciidanka Sweden
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya S/Gaas Maxamed Aaden Axmed, ayaa 26kii Janaayo 2016 ku soo dhaweeyey magaalada Muqdisho Taliyaha Ciidanka Lugta ee dalka Sweden Brigadier General Stefan Andersson oo booqasho ku yimid Muqdisho. Labada Taliye oo kulan gaar ah ku yeeshay Xarunta Wasaaradda Difaaca, ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada ay dawladda Sweden siiso Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed. Sareeyo Gaas Maxamed Aaden Axmed Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ayaa uga mahad-celiyay Taliyaha Ciidanka Lugta ee dalka Sweden booqashada uu ku yimid Muqdisho. Labada dhinac ayaa iska kaashanaya sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo tababarka Ciidanka Xoogga dalka. Brigadier General Stefan Andersson Taliyaha Ciidamada Lugta ee Sweden ayaa xusay in dawladda Sweden ay kordhin doonto taageerada ay la garab taagan tahay Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Iskuul loo diyaariyey Qaxootiga Yemen ee ku sugan Muqdisho
Maamulka mu’asasada Shariif Qulateen ayaa 25kii Janaayo 2016 waxaa uu ku wareejiyay safiirka Yemen ee Soomaaliya Iskuul loogu talagalay in ay wax ku bartaan ardayda qaxootiga Yemeniyiinta ah ee ku nool magaalada Muqdisho, kaasi oo ay goob joog ka ahaayeen Xildhibaan Ibraahim Saalax Deyfulah, iyo Gudoomiyaha Dagmada Shangaani. Gudaha Iskuulka oo ku dhow Safaarada Yemen ee Degmada Shangaani ayaa la geeyay 150 arday oo ka tirsan Qaxootiga Yemen, iyadoo lagu siiyay buugaagta iyo qalmaanta fasalada looga tala galay inay wax ku bartaan ee iskuulka Sharif Qulateen.
Caamir Axmed Maxamed Jakayti Guddoomiyaha Mu’asasada iyo Iskuulka Shariif Qulateen oo waxbarashada lacag la’aanta ah bixiyay ayaa sheegay inay garowsadeen in Carruurta Qaxootiga Yemen inay ku caawiyaan Waxbarashada oo fura u ah nolosha si aanay u halmaamin Soomaaliya. Safiirka Yemen ee Soomnaaliya Danjire Maxamed Shaa’if iyo Xuseen Saalim oo ah Madaxa Jaaliyadda Yemen ee Soomaaliya ayaa ka mahad celiyay Waxbarashada, Buugagta iyo Qalmaanta lacag la’aanta ee la siiyay Ardayda Qaxootiga Yemen.
Ciidanka XDS oo howlgallo ka sameeyey Jowhar
Abanduulaha Ciidanka XDS S/Guuto Cali Baashi Maxamed oo malmahaan ku sugnaa gobolka Shabellada Dhexe ayaa kormeer ku tagay degmooyin iyo tuuloyin hoos taga gobolka Shabellada Dhexe, isagoo u kuurgalay xaaladda ciidamada xoogga dalka Soomaliyeed ee howlgallada ka wado gobolka Sh/dhexe. General Cali baashi ayaa kula dardaarmay Ciidamada Xoogga dalka Soomaliyeed inay mar walba ku dadaalaan gudashadda waajibaadka Qaran oo ah inaan loo ogolaanin cadowga inaay dhibaateeyaan shacabka Soomaliyeed. Abaandulaha ayaa sidoo kale ku bogaadiyay shacabka degmooyinka iyo tuuliyinka uu booqday inay la shaqeeyan Ciidamada si loo helo nabad waarto. Abaanduulaha ayaa sheegay iney sii socon doonaan howlgallada, tan iyo inta dalka oo dhan laga sifeynayo maleeshiyaadka Shabaab.
7 Al-Shabaab ah oo lagu dilay howlgallo
In ka badan ilaa 7 qof ayaa lagu dilay weerar 22kii Janaayo ay shacab hubeysan ku qaadeen saldhig malayshiyaadka Al-Shabaab ku leeyihiin degmada Aden Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo la wareegay saldhigga Al-Shabaab. Shacabka deegaanka oo is abaabulay ayaa u adkeysan waayey falalka argagaxa ee kooxda Al-shabaab, iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka lagula jiro kooxaha Al-Shabaab. Waxaa maalmahan soo badanayey shacab hubeysan oo is abaabulay oo taageerro ka helaya qabiillada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa kordhiyay weerarro iyo dagaallo ay la galeen Al-Shabaab
Previous PostDaawo: Doorka maanta Shacabka waxaa hogaaminkara Aqoon-yahan damiir lahoo daacad iyo wadaninimo ilaah isugu daray.?? Next PostRa'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo sheegay go'aanadii kasoo baxay shirka in Baarlamaanka la horgeynaayo